Nyamavhuvhu 02, 2020
Mike Pompeo, United States Secretary of State
Vakatanga kuwana United Sates, vakadaro gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, VaMike Pompeo, “vakashandura nzira yenhoroondo pavakavamba nyika ichivakwa pamuono wekuti hurumende inovepo kwete kuti izvidze kanaka kubvisa kodzero dzemunhu zvichikonzerwa nevanenge vari mumasimba ekutonga, asi kuvachengetedza.”
VaPompeo mazuva apera vakakumikidza chikwata chevadzidzi pamwe nevanorwira kodzero kuti “vavape yambiro pamusoro pekodzero dzevanhu dzichidzika midzi kubva mumitemo inobva pakaumbwa America nemitemo ya 1948 yepasi rose pakadzikwa mutemo unobata kodzero dzevanhu, kana kuti 1948 Universal Declaration on Human Rights.” Chiitiko ichi, icho chinozivikanwa zvakare sekomisheni yekodzero dzisingachinjanwe kana kutorerwa munhu, kana kuti Commission on Unalienable Rights, chakaburitsa gwaro racho mumazuva apera.
Pakuparurwa kwegwaro rekomisheni iyi, gurukota VaPompeo vakabvuma kuti United States yakaumbwa nedzimwe kodzero dzisingatorerwe munhu dzekuti dai dzisipo “kuedza kose kwatinoita kudzivirira pamwe nekusimudzira kodzero dzevanhu kungadai kusina pakwakabatira, nekudaro, kwaikundikana.”
“Vakatanga nyika ino havana kugadzira ‘kodzero dzinotorerwa munhu,’ asi vakatsanangura zvakajeka muchisungo chekuwana kuzvitonga kana kuti Declaration of Independence kuti vanoonekwa semucherechedzo wekuti vanhu ‘vakasikwa vakaenzana’ uye vakapiwa nemusiki wavo dzimwe kodzero dzavasingagone kutorerwa…. dzimwe dzacho dziri hupenyu, rusununguko, uye kutsvaga rufaro.”
Gwaro reKomisheni yekodzero dzisingatorerwi munhu (Commission on Unalienable Rights) rinokoshesa kuti “zviri pamusoro pakodzero idzi ikodzero dzekuve nezvivakwa nekusunguka kutevera chitendero,” vakadaro VaPompeo.
“Haukwanise kuwana mufaro kana usingakwanise kuwana chedikita rako, uye hapana vanhu vari munharaunda vangakwanisa kuwana chiremera vasina rusununguko rwechitendero,” vakadaro VaPompeo.
Zviri pachena kuti “kodzero dzisingatorerwi munhu dziri pakati pekuti tiri vanaani sezvizvarwa zveAmerica,” nekudaro idzowo dzinofanirwa kutsigira hwaro hwedu hwekudyidzana nedzimwe nyika,” vakadaro VaPompeo.
“Kana tichibvuma zvechokwadi kuti kodzero hadzitorerwi munhu, hadzityorwe, uyewo ndedzemunhu wese pasi rose, sezvakaitwa nevakatanga nyika ino, saka kudzidzivirira ndiwo unofanirwa kuve musimboti wemabasa edu ose mukuedza kudyidzana nedzimwe nyika,” vakadaro VaPompeo.
Nekudaro, kuzvipira kweAmerica mukuremekedza kodzero dzisingatorerwi munhu kumusha kwaratidza kuve musimboti wetarisiro yevanhurume nevanhukadzi vari kune dzimwe nyika vari kutsvakawo rusunguko rwavo. Mucherechedzo mumwechete wakadaro ndewe gandanga rekuSoviet, Natan Sharansky.
Paakanzwa nezvemashoko emutungamiri wenyika VaRonald Reagan pamusoro pehurumende ine hutsinye kana kuti “Evil Empire” ari muhusungwa, akati aive mashoko ane chiedza murima rechizarira chaaive ari muhusungwa.
“Ndinovimba kuti,” vakadaro VaPompeo, “nyeredzi yeAmerica ichajekesa matenga ose, kana chete takachengeta nzwisiso yekodzero dzisingatorerwi munhu pakati pechido chedu chekuwanisa rusununguko kuvanhu vedu nevanhu vese.”
Gumiguru 08, 2020
America Yorwisa Huori hweChina muCambodia nePasi Rose
UDG yekuChina ichivaka nhandare yendege muCambodia
Hurumende yeAmerica yakanangana nekurwisa huori huri kuitwa neChina mumabhizimisi ichibiridzira zviwanikwa zvenyika dzakawanda pasi rose, kusanganisira Cambodia.
Hofisi yebazi rezvemari muAmerica, ye U.S.Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control, yakatemera zvirango kambani yehurumende yeChina, yeUnion Development Group, kana kuti UDG, zvichitevera kubvuta nekuparadza kwayakaita minda yevanhu vemuCambodia kuitira kuti ivake zvivakwa pasi pechirongwa chayo che Dara Sakor Development Project, munzvimbo idzi.
UDG yakaiswa pazvirango pachishandiswa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutara mutemo we Executive Order 13818.Mutemo uyu wakashandiswa mukuzadzisa zviga zvemutemo weGlobal Magnitsky Human Rights Accountability Act, kutemera UDG zvirango, izvo zvinobata vanotyora kodzero dzevanhu, vanoita zvehuori, pamwe nevatsigiri vavo.
Minda yakapihwa UDG inopinda munzvimbo inochengeterwa mhuka, yeBotum Sakor National Park, inova nzvimbo ine zviwanikwa yakachengetedzwa uye inogona kupihwa kuna ani zvake pachishandiswa mitemo yakakosha yemu Cambodia.
Kuti UDG itore nzvimbo iyi, yakazvinyoresa sekambani yemu Cambodia inotungamirwa nechizvarwa chemu Cambodia, asi mukati memakore matatu yapihwa minda iyi, UDG yakazvivandudza kuve kambani yekuChina, ikaramba ichishanda pasina zvakaitwa kwairi.
China inoshandisa zvirongwa zveUDG muCambodia kuitira kuti isimbaradze zvirongwa zvayo zvehupfumi pasi rose.
Zvirongwa zvinotsigirwa neUDG zviri kubvisa vanhu vemuCambodia muminda yavo, uye zviri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza, kuvhiringa hupenyu hwevanhu vemunharaunda, zvose izvi zvichiitwa vanhu vachibatwa kumeso zvichinzi zvakanangana nekuvandudza Cambodia, pamwe nekusimbaradza kushanyirwa kwenyika iyi.
Sezviri kuitika nguva dzose, chirongwa chehurumende yeChina, che ‘One Belt One Road’, chinoshandiswa neChina mukuzvisimbaradza, asi vanhu vemu Cambodia vasina chavanowana. Ichishanda nevaimbove mukuru wemauto muCambodia, VaKun Kim, mauto emuCambodia akabvisa vanhu muminda zvechisimba kuitira kuti chirongwa che Dara Sakor chitangwe.
VaKim vakabatsira UDG kuti iwane minda iyi vakabhadharwa mari yakawanda.
Kanzuru yemakurukota emuCambodia yakaudza UDG kuti imise kupunza misha yevanhu nekutora minda yavo, asi UDG haina kuteerera izvi.VaKim vakambotemerwa zvirango neAmerica muna Zvita 2019.
America inoti icharamba ichitora matanho anorambidza China kutora zvisina mwero hupfumi hweCambodia nepasi pose, uye ichaita izvi ichashanda nemadzisahwira ayo mudunhu riri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAsia.
Editorial USA-China-Cambodia UDG
Gumiguru 02, 2020
Maonero eAmerica paKucheka Hukama neWHO
Gumiguru 01, 2020
Pamire America paHurongwa Hwekucheka Hukama neWHO
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump
America yagara kwenguva yakareba ichibhadhara mari yakawandisa yekubatsira vanhu pasi rose. Mari iyi inobva kumitero inobhadharwa nezvizvarwa zveAmerica paine tarisiro yakakura yekuti inoshandiswa nemazvo.
Asi izvi handizvo zvakaitwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO iro rakakundikana kuita basa nemazvo mukudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus nezvimwe zvirwere sezvarino tarisirwa kunge richiita.
Mutauriri webazi rehurumende reAmerica reState Department VaMorgan Ortagus vanoti WHO yakaramba kuvandudza mashandiro ayo kusanganisira kuratidza kuti haiudzwe zvekuita nehurumende yeChina.Nekudaro musi wa 6 Chikunguru gore rinouya, America inenge yabuda mugungano iri.
Asi America inoti hayo ichiri yakazvipira kubatsira munyaya dzezvehutano pasi rose.America kubva ikozvino iri kutsvaga nzira dzekubatsira dzimwe nyika dzinenge dzawirwa nematambudziko munyaya dzezvehutano kuburikidza nemapazi ayo ehurumende nemasangano akazvimirira oga.
Kubva muna 2001, hurumende yeAmerica yabatsira nemari inosvika mabhiriyoni zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142 billion kudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV/AIDS, malaria, rurindi, Ebola nezvimwe zvirwere.
Mukuru mubazi rehurumende yeAmerica reState Dr. Alma Golden vanoti, Pagore America inobatsira nemari inosvika mabhiriyoni gumi pasi rose, gore rino inenge yakapetwa kaviri apo nyika dzakawanda dzinenge dzichirwisa denda reCovid-19.
VaGolden vanoti chido cheAmerica ndechekuti kunyangwe inenge isisashande neWHO, rubatsiro rwayo rwuchaenderera mberi pasi rose.
Gunyana 30, 2020
Dhibheti Pakati paVaJoe Biden naVaDonald Trump Roodza Moyo Vakawanda
Dhibheti rekutanga pakati pemumiriri weDemocratic Party, VaJoe Biden, pamwe nemumiriri weRepublican Party, uye vari mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, rakatanga neChipiri manheru mu Cleveland mudunhu re Ohio.
Vaviri ava vakatatsurana pamusoro pe Covid 19, hupfumi hwenyika, kugadzwa kwemutongi wedare repamusoro soro, nyaya yerusarura nezvimwe.
Dhibheti iri nderekutanga pamadhibheti matatu achaitwa pakati pevaviri ava, uye raikokerwa nemutori wenhau mukuru wenhepfenyuro yeFox News, Chris Wallace.
Vachitaura mudhibheti iri, VaBiden vakaburitsa hurongwa hwavo hwekusimudzira hupfumi hwenyika vakati chirwere cheCovid-19 chinofanirwa kurwiswa sezvo chiri kubata vatema vazhinji venyika ino.
Joe Biden Presidential debate
VaTrump vakatiwo vakaita zvirongwa zvepamusoro soro uye dai VaBiden vari ivo vange vari kutonga, kwakatofa vanhu vakawanda zvikuru kudarika vafa pari zvino.
Panyaya yekudoma mutongi wedare repamusoro soro, Va Trump vakati ikodzero yavo kudoma mutongi uyu nechimbi chimbi sezvo vari ivo mutungamiri wenyika pari zvino.
Asi VaBiden, avo vakambove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica kwemakore masere, vakati veruzhinji vanofanirwa kupihwa mukana wekudoma mutongi wedare repamusoro soro mutsva kwete kuti zviitwe zvechimbi chimbi.
Mutongi uyu anofanirwa kutsiva Amai Ruth Bader Ginsburg, avo vakashaya nechirwere chegomarara svondo rapera.
Panyaya yehupfumi VaTrump, avo vaipindira nguva zhinji apo VaBiden vaitaura, vakati vakaita zvinhu zvikuru pakusimudzira hupfumi hwenyika.
Asi izvi zvakashorwa naVaBiden vachibata matadziro ari kuita hurumende yaVa Trump kubva zvavasarudzwa musarudzo ya 2016.
Mukokeri wedhebheti iri akanga ari panguva yakaomarara sezvo vaviri ava vakanga vasingatevedzeri gwara rakawiriranwa pahurongwa uhu.
Asi veruzhinji vanoti VaTrump ndivo vakanyanya kusateerera zvaitaurwa naWallace vachiramba vachitaura apo VaBiden vaipa maonero avo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paFriends University kuKansas, Dr Moses Rumano, vanoti havana kufara nemaitiro aVaTrump mudhibheti iri.
DHIBHETI REKUTANGA MARVE SHONA
Gunyana 24, 2020
Mushandira Pamwe weMokeng neAmerica
Musi wa Gunyana 11, America, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, nesangano re ASEAN dzakaumba mushandirapamwe weMekong neAmerica, kana kuti Mekong-U.S. Partnership.
Mushandirapamwe uyu unoratidza kukosha kwedunhu reMekong kuAmerica uye kuwedzera kushanda pamwe kwakatanga muna 2009 pasi pechirongwa che Lower Mekong initiative.
“Tichavaka tichitevera basa rakanaka re Lower Mekong Initiative nemabhiriyoni matatu nemamiriyoni mashanu emadhora ($3.5 billion)yemari yekubatsira dunhu yakabva kuAmerica mumakore gumi nerimwe adarika,” vakadaro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, VaMike Pompeo mumashoko avo.
Pamusangano wekuparurwa kwemushandirapamwe weMekong neAmerica weMekong-U.S. Partnership, America yakazivisa nezvemari inodarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora, kana kuti $150 million yekubatsira dunhu reMekong.
Pamari iyi, mamiryoni makumi mashanu nemaviri emadhora kana kuti $52 million ndeyekutsigira chirongwa chekupona kubva kuCOVID-19, mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora kana kuti $55 million inenge iri yekurwisana nemhosva dzinodarika miganho yenyika dzakasiyanasiyana, mamiriyoni makumimatatu nematatu emadhora kana kuti $33 million, ichabatsira kusimudzira misika yemhando dzemoto, uye mamiriyoni maviri emadhora kana kuti $2 million, ichabatsira mukurwisana nekufambiswa kwevanhu zviri kunze kwemutemo.
Mushandirapamwe weMekong neAmerica wakazvipira mukuzvitonga, kusununguka kwehupfumi, hutongo hwejekerere, nekukura kunochengetedzeka kwenyika dziri mugungano iri.
“Tatsigira kukura kwehupfumi nemari inodarika bhiriyoni imwe chete yekugadzira zvivakwa munyika dziri pasi pedunhu re ASEAN kuburikidza neU.S. International Development Finance Corporation (DFC), nehurongwa hwekudyara mamwe mabhiriyoni mumakore anotevera,” vakadaro VaPompeo.
Vakayambira zvakadaro nezvechidikwadikwa chekutarisana nematambudziko akatarisanwa nawo, “kusanganisira ayo anobva kubato reChinese Communist Party (CCP), iro rinoramba richitysidzira zviwanikwa nekusununguka kwehupfumi mudunhu reMekong.”
Matanho eCCP ekuita zano ndega pakuvhara mvura kumusoro awedzerawo dambudziko rekushaikwa kwemvura kwemakore. America inomira nedunhu iri pamwe nekomisheni inoona nezvemvura yemuna rwizi Mekong, reMekong River Commission mukukurudzira kuti ruzivo rwunenge rwaunganidzwa rwugovanwe zviri pachena.
“Tinokurudzira nyika dziri mudunhu reMekong dzimanikidze CCP kuti imire nemhiko yayo yekuvimbisa kuzivisa ruzivo rwainenge yaunganidza rwakanangana nemvura. Ruzivo irworwo rwunofanirwa kuve pachena rwuchionekwa nevanhu vose. Rwunofanirwa kuburityswa gore rose,” vakapika vachidaro VaPompeo. “Uye rwunofanirwa kugovanwa kuburikidza nekomisheni yeMekong River Commission, sangano rinotungamidza zvido zvenyika dziri mudunhu reMekong, kwete zve Beijing.”
America iri kushushikana zvakare nezvekwereti zvine chewkuita nezvivakwa uye kuhwandira nekusajeka kwenzira dzemabhizimusi emakambani ehurumende ye Beijing, akaita seChina Communications Construction Company. Imwe nyunyuto ndeyekukwira kwekufambiswa kwevanhu zvisiri pamutemo, zvinodhaka, nemhuka dzesango, zvizhinji zvacho zvichibva kumasangano, makambani, nenzvimbo dzine mitemo yakasiyana nedzimwe dzemunyika, kana kuti special economic zones dzinodyidzana neCCP.
Kuburikidza nemushandirapamwe weMekong neAmerica, America inotarisira kudzivirira zvido zveshamwari dzayo nekubatana kuitira runyararo, kugadzikana nebudiriro mudunhu reMekong.
Editorial Mekong Partnership